COVID-19 : Mahatratra 673,43 tapitrisa dôlara ny vola azon’i Madagasikara avy any ivelany
Mitentina 673,43 tapitrisa dôlara ny fitambaran’ireo vola efa nahazoana fankatoavana avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka vahiny fa hanohanana an’i Madagasikara amin’ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19. 4 novembre 2020
Ny 380 tapitrisa dôlara tamin’io no fantatra fa efa nivoaka ary efa nampiasaina raha mbola andrasana kosa ny fivoahan’ireo famatsiam-bola ambiny.
Mametraka ny mangarahara tanteraka ny Fitondram-panjakana ankehitriny amin’ny alalan’ny Minisiteran’ny Toekarena sy ny fitantanam-bola ny amin’ izay nampiasana an’ireo famatsiam-bola azon’i Madagasikara avy any ivelany. Tao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana izay nisedran’ny Firenena ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 dia tsy vitsy ireo mpamatsy vola, rantsan’ny Firenena mikambana ary Firenena vahiny nanohana sy nitondra tolo-tanana ho an’i Madagasikara.
Namoaka tatitra vonjimaika mirakitra ny fitambaram-ben’ny ireo vola azon’i Madagasikara tao anatin’izay niatrehana ny valanaretina izay ny Minisitera tompon’andraikitra. Mitontaly 673,43 tapitrisa dôlara ny vola efa nahazoana fankatoavana fa ho an’i Madagasikara. Ny 56% tamin’io famatsiam-bola io no efa nivoaka ary efa nampiasaina. Anisan’ireo nanohana an’i Madagasikara ny teo anivon’ny Tahirim-bola iraisam-pirenena na Fmi izay namatsy vola mitentina 337 tapitrisa dôlara.
Io vola io dia efa navoakan’izy ireo avokoa natao indroa miantoana. Ny Banky Afrikanina ho an’ny fampandrosoana na ny Bad dia nanome fito tapitrisa dôlara izay mbola an-dalam-pivoahana. Vola izay natokana ho an’ny fanarenana ny toekarena. Ny Banky Arabo ho an’ny fampandrosoana ara-toekarena aty Afrika na ny Badea ihany koa dia nanohana an’i Madagasikara tao anatin’ity fiatrehana an’iny valanaretina iny. Lelavola mitentina 5,5 tapitrisa dôlara no nomeny izay ividianana fiara fitondrana marary miampy ireo kojakoja ho an’ny mpitsabo. Fantatra fa mbola tsy nivoaka ihany koa io vola io. Ankoatra izay, vola mitentina 11,39 tapitrisa dôlara no azo tany amin’ny vondrona Eoropeana entina hanampiana ny tetibolam-panjakana ho tohin’ny fifanarahana efa natao tany Bruxelle, tamin’ny aogositra lasa teo. An-dalam-pamoahana ireo vola ireo. Ny Firenena Japoney nanome 1,18 tapitrisa dôlara izay hividianana fitaovana hampiasaina amin’ny labôratoara, hanatevenana ireo kojakoka ilaina amin’ny fanaovana tombantombana ara-pahasalamana na « diagnostics » sy ny fitaovan’ny mpiasan’ny fahasalamana. Famatsiam-bola izay isan’ireo andrasana hatreto. Ankoatra izay ny Firenena Rosianina dia nanome 29,31 tapitrisa dôlara izay hividianana kojakoja ara-pahasalamana ary ny rantsan’ny Firenena mikambana misakana ny fahasalamana na ny OMS dia nanolotra 23,69 tapitrisa dôlara ka ny 15,37 tapitrisa dôlara tamin’ireo no efa navoaka.
Porofon’ny fangaraharan’ny fitantanana
Tarigetra napetraky ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fametrahana ny mangarahara eo amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana, indrindra fa ny fitantanana ny volam-bahoaka. Hita porofo izao fa tsy nisy niafina ny vola azon’i Madagasikara avy amin’ireo mpamatsy vola vahiny sy ny nampiasana izany. Raha tsiahivina vao nanomboka nanao ranolava ny famatsiana azon’ny Firenena Malagasy hoentina hiatrehana ny valanaretina dia efa nampiaka-peo ireo mpanohitra. Ireto farany izay nitabataba fa tsy misy fangaraharana eo amin’ny fitantanana an’ireo vola azo ary tsy mba manao tatitra amin’ny nampiasana izany ny Fanjakana. Nivoaka ny tatitra ankehitriny na dia mbola tatitra vonjimaika ihany aza. Azo antoka izao fa tao anatin’ny mangarahara tanteraka no nitantanana an’ireo famatsiam-bola rehetra azon’i Madagasikara.
Olona fito nalefa eny Tsiafahy, vehivavy iray notazomina eny Antanimora FANONDRANANA VOLAMENA 73,5KG (1196) 11 janvier 2021 Mety hiafara amin’ny fanenjehana lehilahy iray any Mayotte FANDRANGITANA ADIM-POKO (121) 11 janvier 2021 Tantsambo nitsabo tena nasaina nandohalika avy eo notifirina FAHADISOANA TOMBANTOMBANA (114) 13 janvier 2021 Polisy nandeha môtô maty nohitsahin’ny kamiao LOZAM-PIFAMOIVOIZANA TENY MAHAZO (80) 11 janvier 2021 Lahiantitra 60 taona nanolan-jaza 5 taona VOHIDROTRA TOAMASINA II (76) 14 janvier 2021 Nilaza ho tsy tompon’antoka koa ny Fadintseranana FANONDRANANA VOLAMENA 73,5KG (73) 13 janvier 2021